Thwebula WinNc 9.7 – Vessoft
Isigaba: Ukuphathwa kwefayela
Ikhasi elisemthethweni: WinNc
I-WinNc – imenenja yefayela ehlukahlukene eyenza ukuthi ufeze imisebenzi eminingi ngesikhathi esincane. Isofthiwe ingenza yonke imisebenzi eyisisekelo yemenenja yefayela njengokukopisha, ukuhambisa, ukususa, ukucindezela, ukukhipha uncompress nokudala izixhumanisi. I-WinNc ivela kuhlelo olulodwa lwephaneli oluthuthukisa ukusebenza komsebenzi jikelele futhi lwenza inhlangano yefayili ibe lula. Isofthiwe isekela imibala enengqondo ukuze inqume izenzo zefayela futhi ikuvumela ukuba ubone ukuthi yimaphi amafayela asetshenziselwa ngenkuthalo, futhi yiyiphi kuphela ngezikhathi ezithile. I-WinNc inikeza ukufinyelela okusheshayo kumafayela, kushisa ama-CD, kuvumelanisa amafolda, kufaka amafayili, kubheka amafayili amafayili ezinhlobonhlobo, njll. WinNc iqukethe inombolo ephawulekayo yokukhetha ukuhlunga kanye nezilungiselelo ezinika umsebenzisi inkululeko enkulu yokuphatha amafayela vumela ukushintsha izici ezihlukahlukene zesofthiwe ngokusho okuthandayo.
Imibala eqondayo ukucacisa izenzo zefayela
Iklayenti ekwakhelwe ngaphakathi kwe-FTP
Isibukeli sefayela sezithombe
Ukuboniswa kolwazi lwesistimu
Qalisa izimo eziningi zesofthiwe
Amazwana ku WinNc
WinNc software ehlobene
IObit Uninstaller – isikhipha isoftware engenasidingo, ifakwe izandiso kuziphequluli, izinhlelo zokusebenza ze-Windows kanye namafayili asele.
Isofthiwe Ukukopisha ukuhambisa amafayela ngokushesha. Isakhiwo software kuhlanganisa izici eziningi ezahlukene ukuthi ahlinzeke lula esiphezulu we ukukopisha.
Ithuluzi popular ukuphatha amafayela ezihlukahlukene uhlelo. Isofthiwe isekela plugins eziningi awusizo futhi Izinsiza eyakhelwe-in.
I-Driver Booster – isoftware inesizinda esikhulu sabashayeli nohlelo oluhlakaniphile lokulanda abashayeli abadingekayo abahlolwa kahle ukufakwa okuphephile ohlelweni.
Ithuluzi ukubona futhi silungise amaphutha ohlelweni. Isofthiwe kwenza ukuthumela imibuzo incazelo eningiliziwe yephutha ohlelweni bese skrini Onjiniyela isithangami.
I-JDownloader – umphathi wokulandwa kwamafayela okusheshayo nephumelelayo. Isoftware ikuvumela ukuthi ulande amafayela ezinsizakalweni zokusingathwa kwamafayili ezidumile futhi ufaka phakathi okungeziwe kuwo.
Foobar2000 – kulula ukuyisebenzisa player audio. Isoftware isekela amafomethi amaningi womsindo futhi inika amandla ukufaka ezinye izinto ezengeziwe ukusebenza ngamafayela alalelwayo.